TILMAAMAHA NEEFSASHADA KORITAANKA: TALOOYINKA UGU SARREEYA - SHIMBIRAHA DILLAACA
Digaagga lama tixgelin karo oo kaliya hiwaayad, sababtoo ah waxay noqon kartaa ganacsi faa'iido leh.
Faa'iidada ugu muhiimsan ee taranta nooc kasta oo digaag ah waa dardar-la'aan.
Ka dib oo dhan, ma aha oo kaliya hilibka iyo ukumaha ayaa faa'iido leh, laakiin sidoo kale waxay kufadhigooda, lacag badan ayaa laga heli karaa iyagoo iibinaya saamiyo dhallinyaro ah.
Maanta waxaan rabnaa in aan si faahfaahsan uga ogaano sida ay u fududahay ama u adag tahay in la jiido shimbiraha gudaha ah, tan iyo shimbirahan waxay kuu ogolaaneysaa inaadan dhadhamin oo keliya dhadhankiisa, hilibka, laakiin sidoo kale beerka waa fiican.
Waxaanu diiradda saari doonaa shuruudaha lagama maarmaanka u ah ilaalinta shimbirahan, iyaga oo quudinaya, dhalinyaro yar yar, kobcinta dheeraadka ah iyo daryeelka iyaga.
Doogga gudaha - Sidee faa'iido leh shimbirkan? Fahmaan garwaaqsiyada iyo qasaarooyinka taranta
Dabcan, si kastaba ha noqotee, sida ay u fududahay taranka digaaga ayaa u muuqda, waxaa jira wali xaalado iyo masuuliyado ah in beeraleyda digaaga ay u hoggaansamaan.
Si bilaw ah, aynu eegno waxa faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada ka jirta geedi socodka koritaanka shimbiraha. Sidaa darteed, aan u leexanno waayo-aragnimada beeralayda digaaga kuwaas oo muddo dheer daaqsinka duurjoogta ah oo wax badan ka ogaaday ganacsigan.
Faa'iidooyinka ducks ee gudaha iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin taranka
Haddii aad marka hore diyaariso shuruudaha lagama maarmaanka u ah shimbirahan - waxay kuu siin doonaan tiro aad u tiro badan oo alaabtooda ah. Nasiib daro dhammaan noocyada duck waa kuwo aad u wanaagsan helitaanka miisaanka noolIyadoo aan u baahnayn quudin-badan - badankooda cuntada ayaa awood u leh in ay si madaxbannaan u soo saaraan (gaar ahaan haddii ay jiraan kaydka agagaarka).
Hilibka duurku wuxuu leeyahay noocyo kala duwan mudnaanta:
dhadhan jilicsan, oo ka duwan noocyada kale ee kale, waa ka sarreeya tayada xitaa daahyada;
tiro farabadan oo farabadan oo ay si fudud u nuugaan jidhka bini'aadamka;
hilibka dhirta casriga ah waxa ku jira boqolkiiba mid aad u hooseeya oo dufan ah, oo ka dhigaya cunto;
hal shinni hilib shakhsi ah ayaa soo saari kara qiyaastii 2.5 kiiloogaraam alaabta wanaagsan.
Sidoo kale, ha iloobin jiritaanka jirro khaas ah oo ka mid ah ducks, kuwaas oo si gaar ah loogu koray si loo soo saaro beerka tayada sarreeya, oo loo isticmaalo si loo diyaariyo suugaanta caanka ah ee cawska foie. Isla mar ahaantaana, miisaanka beerka ee mid ka mid ah nuugida qaangaarka ah ayaa gaari kara 0.5 kilo.
Beeralayda duurjoogta ah ee ganacsigu waxay hirgeliyaan makhaayadaha caanka ah, iyagoo lacag weyn helaya. Waxa kale oo aad hirgelin kartaa ukun dufan, taas oo qoyska dhexdiisa sidoo kale qiime weyn leh: waxay yihiin kuwo aad u sarreeya, kalooriye aad u sarreeya, oo leh qolof adag. Si kastaba ha noqotee, dad badani ma jecla ur aan uray, laakiin guud ahaan way fududahay in la isticmaalo.
Kuwa kale mudnaanta Daraasadaha dillaaca guriga waa in loogu yeeraa:
Ducks waxay ku dhowyihiin dhammaantood, cunaan oo dheefshiiyaan cuntada dhirta iyo xoolaha iyada oo aan wax dhibaato ah. Iyada oo ay ka kooban tahay biyaha, shimbirahaasi waxay sidoo kale qaataan doorka filtarrada dabiiciga ah.
Waxay ka tirsan yihiin mid ka mid ah noocyada ugu badan ee wax soo saar iyo kobcinta shimbiraha.
Muhiimadda weyn ma aha oo kaliya wax soo saarka tooska ah ee qaabka hilibka duurjoogta, ukunta iyo fluff, laakiin sidoo kale dhibicda shimbirahan. Waa mid ka mid ah bacriminta ugu fiican ee sariiraha beerta.
Ducks waa nadiif ah, ma dhejin baco iyo hoos, kaas oo u ogolaanaya in la xaqiiqsadaa.
Ducks waxay xitaa kori kartaa baqashada, taas oo ka dhigaysa meel bannaan, mashruucyada geedi socodka quudinta cuntada iyo biyaha, iyo ururinta ukunta. In unugyada waxaa aad u fududahay si loo ilaaliyo bay'ada nadaafadda.
Dareemo la socota naas-nuujinta
Inkasta oo aynu ka sarreeyahay oo aan uxusannay habka gacanta oo lagu ilaaliyo ducks si faa'iidooyinka, hase yeeshee waxa ay saameeyn ku yeelaneysaa wax soo saarka xun. Ka dib oo dhan, habka ugu wanaagsan ee loo abuuro shimbirahan waa in la helo dabiici ah dabiiciyo leh balli.
Iyadoo aan la socon shuruudahaas, waxa ay bilaabi karaan inay soo saaraan xaddi badan oo dufan ah, taas oo sidoo kale saameyneysa tayada ukumaheeda.
Waxaa la rumeysan yahay in maadada gacanta ay saameyn ku leedahay tayada hilibka duck. Marka la eego nafaqada, waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad si buuxda u waafajiso shuruudahan oo kale sida tayada, nafaqada iyo nadaafadda.
Iyada oo la dayactirayo tiro badan oo ka mid ah shimbiraha, waa inaad iska ilaawisaa kuulaha shaahaaga (gaar ahaan haddii uu yahay balli aan dabiici ahayn). Shimbiruhu waxay gooyaan xeebta oo dhan, qashin badan oo qashin ah ayaa soo ururin kara meel u dhow. Sidoo kale, hoos u dhac iyo baal badan ayaa ku dul soconaya dusha sare ee kaydka.
Waxaan dhisaynaa guri digaag ah oo loogu talagalay ilaalinta ducks
Qolka shimbiraha uma baahna in la dhiso meel aad u ballaaran. Marka hore, shimbiraha naftooda uma baahna, iyo marka labaad - qolka yar, si fudud u kululaan ama diiran inta lagu jiro xilliga jiilaalka.
Doorka muhiimka ah ee kan ayaa lagu ciyaara xaqiiqda taas shimbiraha ayaa si khaas ah u socda "dhulka hoos loogu maro" habka nolosha, uma baahna daloolo sare ama tuubooyin gaar ah, sida digaagga ama turkiga.
Marka la eego arrintani waa mid ku filan in la dhiso guri leh derbi hore oo ah 1.8 mitir, iyo 1 mitir oo kaliya. Iyo cufnaanta meelaynta ducks 1m2 oo aad u sareysa. Meelahan waxay noqon doontaa meel ku filan oo loogu talagalay 3 qof.
Waa mid aad u muhiim ah in xilliga qaboobaha ay jiraan qashin badan oo qolka. Maaha oo kaliya in ay diiriso guriga, laakiin waxay ka caawisaa shimbiraha in ay qariyaan oo diiriyaan, si ay u dhisaan buulkoodii. Mid ka mid ah qashinka duck waa inuu ahaado qiyaastii 6 kiilo.
Waxaad isticmaali kartaa hay ama cows. Marka dibedda ay noqoto mid diirran, waxaa wanaagsan in la nadiifiyo qashinka oo dhan: shimbiraha ayaa dhidid kuleylka xagaaga, cawska qallalan waxay nuugi doonaan qoyaan (dhidid), qoyan ayaa ku dhici doona guriga, kadibna cuduro kala duwan.
Noocyada mikroclimate ee lagama maarmaanka u ah ducks iyo caruurtooda
Shuruudaha xaaladaha heerkulka. Noocyada waaweyni waxay awoodaan in ay u dulqaadan karaan heerkulka qabow halkii si adag, laakiin ma barafoobin. Sidaa darteed, heerkulka guriga waa in aan loo oggolaan inuu hoos u dhaco 0 ° C.
Inta lagu jiro dhigista shimbiraha, waxay u fiicantahay in lagu hayo heerkulka 18-20 ° C, taas oo saameyn aad u wanaagsan ku yeelan doonta hawlahooda la midka ah. Marka ilaalinta ducklings yar yar oo kaliya oo ka soo baxa ukunta, heerkulka waa in lagu hayaa inta u dhaxaysa 29-32 º.
Toddobaad kasta waxay si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacdaa 20 º waxay aqbaleysaa dadka waaweyn.
Baahida loo qabo in kor loo qaado heerkulka waxaa lagu go'aamiyaa habdhaqanka shimbiraha. Haddii ay bilaabaan inay si joogto ah isu soo wada duubaan, cunaan wax yar, miisaanka oo lumaan - macnaheedu waa inay barafoobaan. Xaaladdan oo kale, hubso inaad guriga kudheesho hab kasta.
Iyadoo kulaylka aad u sarreeya, shimbiruhu waxay yeelan doonaan neef deg deg ah, waxay ku socon doonaan iyagoo baalashooda ku faafaya, waxay cabbi doonaan wax badan. Xaaladdan, waxaad u baahan doontaa inaad hagaajiso hawo-qaadashada.
Heerka loo baahan yahay qoyaanka guriga. Doomaha qoyaanku waxay u dulqaadanayaan dhibaato aad u daran, inkastoo ay ka tirsan yihiin shimbir biyaha ah. Way ka fiican tahay in aysan ka badnayn tirada 65-70%.
Qoyaan badani waxay saameyn xun ku leedahay sida shimbiruhu kor u kaco, waxay sidoo kale bilaabi karaan baadad dhicin. Iyada oo qoyaan aad u sarreeya, difaaca jirka ayaa aad u yaraaday. Waa inaanu u oggolaanno dhibcooyin aad u fiiqan oo muujinaya tilmaameedda, ducks ayaa aad u xasaasi ah tan.
Cadaadiska waa mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee ducks taranta. Waa arrin aad muhiim u ah inaad guriga sameyso si xilliga dayrta iyo horraanta xilliga guga hawadu mar walba geli karto qolka iyo wasakhda ka baxsan.
Xilliga jiilaalka, hawo nadiif ah oo hawo kulul ayaa loo baahan doonaa. Iyo cimilada kulul, shimbiruhu waxay had iyo jeer ku socon doonaan socodka ama hareeraha, si ay u helaan hawo cusub oo ku filan.
Guriga iftiinka dabiiciga ah iyo kan dabiiciga ah. Nalalka dabiiciga ah waa inaysan noqon mid aad u badan, sababtoo ah waxay yeelan doontaa daaqado waaweyn - ilaha tooska ah ee qabow. Laakiin haddii aad rabto in aad shimbirahaada u dhigto ukumaha si fiican oo dheer - waa mid aad u muhiim ah in la fuliyo iftiinka macmal ee guriga.
Gaar ahaan, iyada oo gargaar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo maalinta iftiinka jiilaalka, iyada oo la haynayo ilaa 12 saacadood (oo ay weliba ku jiraan subaxda iyo fiidka). Laga bilaabo inuu iftiinka iftiimiyo waa laga bilaabo dhammaadka Diseembar-bilowgii bisha Janaayo, taas oo kicin doonta luminta baalasha shimbiraha iyo hagaajinta habka isu-ururinta miisaanka jirka.
Waqtiga gu'ga, iftiinka macmalka ee qumman wuxuu si fiican u kiciyaa dhaqdhaqaaqa galmada, sidaas awgeed xilliga iftiinka maalinta ayaa la kordhin doonaa 2-3 saacadood.
Waxaan qabanqaabinaa booska ugu fiican ee socodka ducks: Maxaa la sameeyaa haddii aanu jirin biyo biyo ah?
Xulashada ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo ducks, iyo sida ugu fiican ee labada shimbiraha naftooda iyo milkiilayaashooda waa bilaash waxay ku dhow yihiin biyo dabiici ah. Wixii shimbiraha, tani waa wax fiican in ay awoodaan in ay helaan meelo dabiici ah oo dabiici ah.
Baanku wuxuu siin doonaa cuntada muhiimka ah - weevil, cayayaanka kala duwan iyo kalluunka yaryar. Sidoo kale, biyaha, shimbirahan waxay jecel yihiin inay ku qaboojiyaan maalmo aad u kulul. Faa'iidada noocan ah dayactirka waxaa lagu xusay xaqiiqda ah in xaaladaha noocaas ah kicinayaan kobcinta degdega ah ee xayawaanka yaryar iyo gelitaanka guntooda.
Dadka waaweyn sidoo kale waxay helayaan miisaan badan, xitaa shinbiraha ma aha mid cayilan, maadaama ay helayaan fursad ay ku guuraan wax badan.
Maxay u socdaan meel u dhow isbitaallada biyaha ee faa'iido u leh beeraleyda digaaga? Haa, haddii kaliya sababtoo ah xilliga kuleelku maaha in la dhiso qalimo khaas ah oo shimbiraha ah oo isku daya sidii loo siin lahaa xaddiga lagama maarmaanka ah ee nadiifinta biyaha iyo cuntada.
By habka, feed ayaa sidoo kale soo baxaan si aad u wanaagsan si badbaadin - ku dhowaad 5 jeer. Iyada oo socodka dabiiciga ah, shimbiruhu waxay doortaan cuntada muhiimka ah, taas oo si fiican uga muuqata hababka dheef-shiidka. Sidoo kale, kiiskan, shimbiraha uma baahna inay dhisaan cayayaanka khaaska ah, oo ay ku dhuuman karaan qorraxda kulul.
Shaqadaada kaliya ayaa ah inaad subaxda ka soo saartid guriga oo aad u kaxeyso balli, oo fiidkiina waxaad cuntaa cunto iyo dib u soo celi guriga.
Haddii aad leedahay deyr yar oo aan lahayn kaydka biyaha, markaa dhammaan xaaladaha lagama maarmaanka ah waa in la abuuraa dabeecad. Waxa ugu muhiimsan waa in la dhiso wax la mid ah barkad ama balli yar oo si joogto ah loo nadiifin karo loona buuxiyo biyo cusub.
Ducks waxay hubaal ahaan u baahan yihiin inay bixiyaan xaddi badan oo cunto dabiici ah, gaar ahaan duckweed.
Qalinka laftiisa waa in uu ahaadaa mid weyn oo ku filan si ay shimbiraha u socon karaan si xor ah iyada oo aan wax faragelin ah. Fikrad ahaan, khariidadu waxay ku taallaa meel u dhow meesha ay ka baxayaan gurigooda.
Cunto dufan: cuntada ay tahay waxa ugu wanaagsan si loo gaaro koritaan degdeg ah oo shimbiraha ah?
Ducks waxay ku habboon yihiin noocyada cuntada ee isku dhafan, marka ay isku daraan ma aha oo kaliya quudinta, laakiin sidoo kale cagaarka, mado qoyan, qaybaha macdanta. Tani waxay ka dhigaysaa cuntada isku dheelitiran, waxay leedahay saameyn togan oo ku saabsan habka dheef-shiidka ee shimbiraha.
Si toos ah oo ku jirta quudinta waxaad ku dari kartaa:
Miraha kala duwan - sarreen, galley ama shaciir (ama dhammaantoodba).
Cuntada laga helo soy ama sunflower.
Biyaha (Boorash laga soo saaro digir).
Lafta, boodhka, kalluunka iyo lafta iyo cuntada lafaha.
Seashells, cusbada iyo milixda.
Waa kuwee quudiyayaasha loo rakibay shimbiraha?
Noocyada doogga waxaa si toos ah loogu rakibi karaa dabaqa, maadaama ay yihiin nooca shimbiraha leh lugaha aad u hooseeya. Xaaladdan, waxay noqon doontaa mid aad u haboon in la cuno. Si kastaba ha ahaatee, si aysan shimbiraha u kala firdhin cuntada, hal mar oo ku yaal xayndaabku ma dhicin hurdo badan, iyo sida saxda ah ee baakadka uu awoodi doono inuu cuno hal mar.
Sidoo kale, dhammaan shimbiraha, waxaa jira inta badan hal ama laba qof oo jecel in ay gasho cagaha iyaga oo cagaha ku jira, cunto cunaya oo aan cunto siin karin qaraabada kale. Sidaa daraadeed, ka sarreeya quudinta, waxaa muhiim ah in la sameeyo wax la mid ah qalin kaas oo ka hortagi lahaa ducks in uu gudaha galo.
Shuruudaha loogu talagalay foornada cabitaanka ee shinbiraha
Doorka biyaha la cabbo ee shimbiraha ayaa sidoo kale lagu samayn karaa kaydka, laakiin waa inay sidoo kale lagu rakibaa dhismaha guryaha.
Waxa ugu wanaagsan in la doorto alwaax, oo leh darbiyo dhuuban. Fikrad ahaan, haddii biyaha ku jiri doona, taasi waa, joogto ah oo cusub. Ducklings yar yar waxaa ku haboon in lagu rakibo cabitaanada fareebka.
Dhalinyaro yar oo ka mid ah shimbiraha laga helo hiddaha iyo iyada oo loo marayo hen
Noocyada aan dhibaatooyinka lahayn waxaa lagu dabiici karaa oo dabiici ahaan loo isticmaali karaa digaag, iyo isticmaalka masraxa.
Si kastaba ha ahaatee, hababkani labaduba waa kuwo waxtarka leh, hase yeeshee, marka la isticmaalo xashiishka, ducklings ma lahaan doono hooyo, waana in la raacaa si taxadar leh loona ilaaliyo.
Hase yeeshee, kumbuyuutarku waa inuu kuu ogolaadaa inaad hesho tirada ugu badan ee suurogalka ah.
Ka dib markii dhan, marka duck ku kulul ukunta, hatchability ee stock yar yar ku tiirsanaan doonaa oo kaliya on muujinta of dareen hooyo.
Sidoo kale, xayawaanka ugu badan ee ducklings aad rabto inaad hesho, tirada weyn ee chicks waa in la iibsado.
Sida loo koro duck dhalinyarada: quudinta iyo xaaladaha bilaha ugu horreeya dhalashada kadib
Ducklings oo kaliya dhashay waxaa la quudin karaa ukunta la kariyey. Maalinta saddexaad, waxaa loo oggol yahay in lagu daro jiis, taas oo kale maalin ka dib badarka kala duwan ee la kariyey. Laga bilaabo maalinta afaraad waxay mar hore suurtogal tahay in lagu daro cagaarka iyo qashinka hilibka si loogu daro.
Tobanka sano ee hore, ducklings ayaa horay loo siin karaa baradho la kariyey, laakiin sidoo kale waxay yeelan doontaa dhulka. Waxaa ugu wanaagsan in la siiyo ducklings mashiinka qoyan, taas oo u fududaan doonta iyaga oo aan kaliya wax liqin, laakiin sidoo kale in la dheefshiido.
Ducklings yar oo bilowga hore u baahan tahay in la baro in ay cunaan cunto. Dhibaatadani waxay si gaar ah u xanuunsan tahay marka dhalinyaradu ay ku dhashaan iyagoo isticmaalaya kumbuyuutar. Si taas loo sameeyo, waa in cuntada si toos ah loogu soo qaato guluubka si ay nuugista u qabato waxoogaa yar oo dareemeysa dhadhankiisa.
Waa mid aad u muhiim ah in qolka lagu hayo ducklings uu yahay mid u fiican sida ugu macquulsan. Marka dhan, haddii ay yihiin dad aad u tiro badan, kuwa ugu xoogga badan waxay cunto ka helayaan kuwa daciifka ah, sidaa daraadeed waxay sii wadi doonaan horumarkooda.
Waxaa loo ogolaan karaa in ay baxaan maalinta afraad ee nolosha. Si kastaba ha ahaatee, ka taxadar in ducklings aanay ku dhejin meel kasta, lumay oo aan ku dhacin ilkaha eeyga ama bisad. Si tartiib ah u sadaqo biyo.
Sida loo daryeelo ducks si looga hortago buurnaanta iyo dhacdooyinka cudurada
Iska ilaali xayawaanka xayawaankaaga, iskuday in aad ka dhigto mid kala duwan oo nafaqo leh intii suurtagal ah. Ku dar miinada si joogto ah.
U sii shimbiraha shimbiraha leh meel aad u suurtogal u ah socodka. Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la ilaaliyo xeerkan xilliga qaboobaha, sababta oo ah waqtigan shimbiruhu waxay si gaar ah ugu nugul yihiin cayil.
Dabeecada miiqda waa calaamadda ugu muhiimsan ee bilawga cudurka. Sidaa darteed, haddii aad dareentid caajis ku ah shimbiraha, ama, liddi ku ah, waxqabadka aan la fahmi karin, isla markaaba si taxadar leh u fiiri shakhsiyaadka, ka ilaali inay dhexgalaan suurtagalinta adhiga iyo sii wadista daaweynta.
Si ukumaha loo bacrimiyo, hubi inaad dhawr jeer oo ducks ku haysato adhiga shimbiraha.
Noqo mid ka mid ah dabeecadaha laysku halleyn karo. Ka dib marka la eego, talooyinka laga yaabo in ay khasab tahay in shimbiraha qaar laga yaabo in ay gebi ahaanba aan la aqbali karin dadka kale.